သူမဆီကနေ သင် သိုဝှက်ထားလို့ မရတဲ့အရာများ – Gentleman Magazine
လူတိုင်း အမှား လုပ်တတ်တာ ချည်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို အတိတ်တုန်းက လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက် အခုအချိန်မှာ ဖုန်းကွယ်ထားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကောင်မလေး အဲဒါတွေ အကြောင်းမေးလာတိုင်း စကားရော ဖောရောလုပ်ပြီး ရှောင်ထွက်သွားလို့ မရပါဘူး။ ရိုးသားမှုက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင် သိုဝှက်ထားချင်ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း သူမသိလာမဲ့ အရာ ၁၀ ခုအကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. သင် အပြာကား ကြည့်တာ
သင် အပြာကားကြည့်ပါတယ်။ သူမလဲ ကြည့်ဖူးဖို့ လမ်းများပါတယ်။ သင်က အပြာကားကြည့်တာ ဘယ်လောက် မကြိုက်ဖူးပဲပြောပြော သူမ ယုံဖို့ မရှိပါဘူး။ တစ်နေ့မှာ သင့်ဖုန် Gallery ထဲက 10 GB လောက်ရှိတဲ့ အပြာကားတွေကို တွေ့သွားရင်တော့ သင့်မှာ လိမ်မှုနဲ့ ကွိုင်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အပြာကားကြည့်မှုက ကွိုင်မတက်ပါဘူး။
၂. အကြွေး အများကြီး ရှိတာ
ကျွန်တော်တို့မှာ အကြွေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ လူတိုင်း ချေးငှါးဖူးတာ ချည်းပါပဲ။ သင် ပိုက်ဆံ ချေးထားတာ သူမကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တာဝန်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူမဆီကတော့ ဖုန်းကွယ်မထားပါနဲ့။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကို အပါတ်တိုင်း ငြင်းနေရင်တော့ သူမ သံသယ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ သူမကို သေချာရှင်းပြပြီး အကြွေးကြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ် စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာပါ ပြောပြလိုက်ပါ။
ခြောက်ပါတ်စာလောက် မဆေးရသေးတဲ့ ပန်းကန်တွေ ဘေစင်ထဲမှာ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိတာ၊ ခုံတွေ ကုတင်တွေမှာ အဝတ်ညစ်ညစ်ပါတ်ပါတ်တွေနဲ့ လွှမ်းထားတာ၊ အဲဒိအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံရင်တော့ သင်ဟာ ညစ်ပါတ်ပါတယ်။ မြန်မြန်ရှင်းဖို့ ပြင်ထားပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ သူမလဲ ညစ်ပါတ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ သူမ သင့်အခန်း လာလည်တိုင်း ရှင်းဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
၄. အရင်က မိန်းမရှုပ်ဖူးတာ
မိန်းမတွေဟာ အဲဒိကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်လာရင် သတင်းထောက် အရမ်းကျွမ်းကျင်တတ်ပါတယ်။ သင် အရင်က ပွေဘူးတယ်ဆို ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုကြိုတင်တင် ပြောပြထားပါ။ သူမဘာသာ စုံစမ်းလို့ သိသွားရင်တော့ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်သွားမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၅. သင့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ
သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဒေါသတွေကို အစမှာတော့ သူမဆီက သိုဝှက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကြာလာရင် အဲဒါတွေက သူမကို သွားထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ အစကထဲက သူမကို ပြောပြထားပြီး နှစ်ယောက်တူတူ ပြင်ဖို့ ကြိုးစားတာက ပိုပြီး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သင် စိတ်ထိခိုက်နေရင် သူမကို ချော့ခွင့် ပေးလိုက်ပါ။
၆. ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ဆေးချတာ
သင်ကတော့ သူမ မရှိချိန် အဲဒါတွေ လုပ်လို့ရတယ် ထင်နေမှာပါ။ သင်တကယ်လုပ်နေတာက အဲဒါတွေကို သင့်ကို ချစ်တဲ့သူထက် ပိုပြီးအရေးပေးနေတာပါပဲ။ ဖြစ်သင့်တာက သူမကို အသိပေးထားပါ။ ပြီးတော့ တတ်နိုင်ရင် သူမရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပြင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
သဝန်မတိုပါနဲ့ ဆိုတာဟာ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်ပါတယ်။ မိန်းမတွေက သင် သူမကို ဂရုစိုက်တာ ကြိုက်ကြပေမယ့် သူမဆီလာတဲ့ ဖုန်းတိုင်းကို ဒါဘယ်သူလဲ မေးနေရင်တော့ စိတ်ညစ်လာမှာပါ။ တခြားကောင်တွေနဲ့ သဝန်တိုတတ်ရင် သူမကို ကြိုပြောထားပါ။ မဟုတ်ရင် ရန်ပွဲတွေနဲ့ သင်တို့ ဇာတ်လမ်း ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
၈. ဘာသာတရား ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးမှာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတာ
သင်နဲ့ သင့်မိန်းကလေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး အမြင်မတူပဲ အဆင်ပြေမလားဆိုတာ ဘယ်လောက် သဘောထားကြီးနိုင်မလဲဆိုတာ မူတည်ပါတယ်။ သင်က ဘာသာမဲ့၊ သူမက ခရစ်ယန်ဆိုရင် ချစ်စမှာတော့ ကျော်လွှားသွားနိုင်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာရင်တော့ ပြသနာ ဖြစ်လာမှာပါ။ နိုင်ငံရေးလဲ တူတူပါပဲ။ အရေးကြီးတာက သူမနဲ့ အစကတည်း ရည်းစားမဖြစ်ခင်ထဲက ဆွေးနွေးထားဖို့ပါ။
၉. ကျန်းမာရေး ပြသနာများ
ပထမဆုံး Date မှာ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမကောင်းကြောင်း မပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း ဖုံးကွယ်လို့ ရမယ် မထင်ပါနဲ့။ STD၊ ဆီးချို၊ သေးသေးမွှားမွှား ဆံပင်ကျွတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမသိလာမှာပါ။ သင်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးပြသနာတွေအကြောင်း စောစော ဆွေးနွေးနိုင်ရင် ချစ်ဇာတ်လမ်း ရေရှည် တည်တံ့ပါမလားဆိုတာ စောစော ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
၁၀. ယောက်ျားအလုပ်တွေ မလုပ်တတ်တာ
သင် ကားတာယာချိန်းတာက စပြီး ဘီယာချက်တာအထိ ယောက်ျားအလုပ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ သင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတတ်ရင်လဲ သူမအတွက် အရမ်းကိစ္စ မရှိပါဘူး။ သူမနဲ့ တူတူ ခရီးသွားတုန်း ကားဘီးပေါက်သွားလို့ သင်မလုပ်တတ်ရင် တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းလိုက်ပါ။ မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ သူမကို မလိမ်ညာပါနဲ့။
သူမဆီကနေ သငျ သိုဝှကျထားလို့ မရတဲ့အရာမြား
လူတိုငျး အမှား လုပျတတျတာ ခညျြးပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ ဂုဏျယူစရာမဟုတျတဲ့ ကိစ်စလေးတှကေို အတိတျတုနျးက လုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ ကိုယျကငျြ့တရားအတှကျ အခုအခြိနျမှာ ဖုနျးကှယျထားရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကောငျမလေး အဲဒါတှေ အကွောငျးမေးလာတိုငျး စကားရော ဖောရောလုပျပွီး ရှောငျထှကျသှားလို့ မရပါဘူး။ ရိုးသားမှုက အကောငျးဆုံး နညျးလမျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သငျ သိုဝှကျထားခငျြပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျး သူမသိလာမဲ့ အရာ ၁၀ ခုအကွောငျး ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. သငျ အပွာကား ကွညျ့တာ
သငျ အပွာကားကွညျ့ပါတယျ။ သူမလဲ ကွညျ့ဖူးဖို့ လမျးမြားပါတယျ။ သငျက အပွာကားကွညျ့တာ ဘယျလောကျ မကွိုကျဖူးပဲပွောပွော သူမ ယုံဖို့ မရှိပါဘူး။ တဈနမှေ့ာ သငျ့ဖုနျ Gallery ထဲက 10 GB လောကျရှိတဲ့ အပွာကားတှကေို တှသှေ့ားရငျတော့ သငျ့မှာ လိမျမှုနဲ့ ကှိုငျတကျသှားပါလိမျ့မယျ။ အပွာကားကွညျ့မှုက ကှိုငျမတကျပါဘူး။
၂. အကွှေး အမြားကွီး ရှိတာ
ကြှနျတျောတို့မှာ အကွှေးတှေ ရှိတတျပါတယျ။ လူတိုငျး ခြေးငှါးဖူးတာ ခညျြးပါပဲ။ သငျ ပိုကျဆံ ခြေးထားတာ သူမကိစ်စတော့ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့တာဝနျပါ။ ဒါပမေယျ့ သူမဆီကတော့ ဖုနျးကှယျမထားပါနဲ့။ ရုပျရှငျကွညျ့ဖို့ကို အပါတျတိုငျး ငွငျးနရေငျတော့ သူမ သံသယ ဝငျလာပါလိမျ့မယျ။ သူမကို သခြောရှငျးပွပွီး အကွှေးကွအေောငျ ဘယျလိုလုပျမယျ စီစဉျထားတယျဆိုတာပါ ပွောပွလိုကျပါ။
ခွောကျပါတျစာလောကျ မဆေးရသေးတဲ့ ပနျးကနျတှေ ဘစေငျထဲမှာ၊ ကွမျးပွငျပျေါမှာရှိတာ၊ ခုံတှေ ကုတငျတှမှော အဝတျညဈညဈပါတျပါတျတှနေဲ့ လှမျးထားတာ၊ အဲဒိအရညျအခငျြးတှနေဲ့ ပွညျ့စုံရငျတော့ သငျဟာ ညဈပါတျပါတယျ။ မွနျမွနျရှငျးဖို့ ပွငျထားပါ။ တဈခါတဈလမှောတော့ သူမလဲ ညဈပါတျတတျပါတယျ။ အဲဒါဆိုရငျတော့ သူမ သငျ့အခနျး လာလညျတိုငျး ရှငျးဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
၄. အရငျက မိနျးမရှုပျဖူးတာ
မိနျးမတှဟော အဲဒိကိစ်စနဲ့ ပါတျသတျလာရငျ သတငျးထောကျ အရမျးကြှမျးကငျြတတျပါတယျ။ သငျ အရငျက ပှဘေူးတယျဆို ဘာကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ ကွိုကွိုတငျတငျ ပွောပွထားပါ။ သူမဘာသာ စုံစမျးလို့ သိသှားရငျတော့ ဘာဖွဈလို့ ဖွဈသှားမှနျးတောငျ သိမှာမဟုတျပါဘူး။
၅. သငျ့ရဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာမြား
သငျ့ရဲ့ စိတျဖိစီးမှု၊ ဒေါသတှကေို အစမှာတော့ သူမဆီက သိုဝှကျထားနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွာလာရငျ အဲဒါတှကေ သူမကို သှားထိခိုကျစပေါလိမျ့မယျ။ အစကထဲက သူမကို ပွောပွထားပွီး နှဈယောကျတူတူ ပွငျဖို့ ကွိုးစားတာက ပိုပွီး ကောငျးမှနျပါတယျ။ သငျ စိတျထိခိုကျနရေငျ သူမကို ခြော့ခှငျ့ ပေးလိုကျပါ။
၆. ဆေးလိပျသောကျတာ၊ ဆေးခတြာ
သငျကတော့ သူမ မရှိခြိနျ အဲဒါတှေ လုပျလို့ရတယျ ထငျနမှောပါ။ သငျတကယျလုပျနတောက အဲဒါတှကေို သငျ့ကို ခဈြတဲ့သူထကျ ပိုပွီးအရေးပေးနတောပါပဲ။ ဖွဈသငျ့တာက သူမကို အသိပေးထားပါ။ ပွီးတော့ တတျနိုငျရငျ သူမရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပွငျဖို့ကွိုးစားပါ။
သဝနျမတိုပါနဲ့ ဆိုတာဟာ အပွောလှယျသလောကျ အလုပျခကျပါတယျ။ မိနျးမတှကေ သငျ သူမကို ဂရုစိုကျတာ ကွိုကျကွပမေယျ့ သူမဆီလာတဲ့ ဖုနျးတိုငျးကို ဒါဘယျသူလဲ မေးနရေငျတော့ စိတျညဈလာမှာပါ။ တခွားကောငျတှနေဲ့ သဝနျတိုတတျရငျ သူမကို ကွိုပွောထားပါ။ မဟုတျရငျ ရနျပှဲတှနေဲ့ သငျတို့ ဇာတျလမျး ဆုံးသှားပါလိမျ့မယျ။
၈. ဘာသာတရား ဒါမှမဟုတျ နိုငျငံရေးမှာ အရမျးစိတျဝငျစားတာ
သငျနဲ့ သငျ့မိနျးကလေးနဲ့ နိုငျငံရေး ဘာသာရေး အမွငျမတူပဲ အဆငျပွမေလားဆိုတာ ဘယျလောကျ သဘောထားကွီးနိုငျမလဲဆိုတာ မူတညျပါတယျ။ သငျက ဘာသာမဲ့၊ သူမက ခရဈယနျဆိုရငျ ခဈြစမှာတော့ ကြျောလှားသှားနိုငျပမေယျ့ အခြိနျကွာလာရငျတော့ ပွသနာ ဖွဈလာမှာပါ။ နိုငျငံရေးလဲ တူတူပါပဲ။ အရေးကွီးတာက သူမနဲ့ အစကတညျး ရညျးစားမဖွဈခငျထဲက ဆှေးနှေးထားဖို့ပါ။
၉. ကနျြးမာရေး ပွသနာမြား
ပထမဆုံး Date မှာ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးမကောငျးကွောငျး မပွောတာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမွဲတမျး ဖုံးကှယျလို့ ရမယျ မထငျပါနဲ့။ STD၊ ဆီးခြို၊ သေးသေးမှားမှား ဆံပငျကြှတျတာပဲ ဖွဈဖွဈ တဖွညျးဖွညျးနဲ့သူမသိလာမှာပါ။ သငျတို့ရဲ့ ကနျြးမာရေးပွသနာတှအေကွောငျး စောစော ဆှေးနှေးနိုငျရငျ ခဈြဇာတျလမျး ရရှေညျ တညျတံ့ပါမလားဆိုတာ စောစော ဆုံးဖွတျနိုငျပါတယျ။
၁၀. ယောကျြားအလုပျတှေ မလုပျတတျတာ
သငျ ကားတာယာခြိနျးတာက စပွီး ဘီယာခကျြတာအထိ ယောကျြားအလုပျတှကေို တတျနိုငျသမြှ သငျထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မတတျရငျလဲ သူမအတှကျ အရမျးကိစ်စ မရှိပါဘူး။ သူမနဲ့ တူတူ ခရီးသှားတုနျး ကားဘီးပေါကျသှားလို့ သငျမလုပျတတျရငျ တခွားယောကျြားတဈယောကျကို အကူအညီတောငျးလိုကျပါ။ မလုပျတတျလုပျတတျနဲ့ သူမကို မလိမျညာပါနဲ့။
Previous: အလုပ်တွင်ကျယ်စေဖို့ ရှောင်ရန် ၅ ချက်
Next: သင့်လက်သူကြွယ်က ပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်း